ညီလင်းသစ်: Soil study တခန်းရပ်
Soil study တခန်းရပ်
ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ကတည်းက စ,လုပ်လာခဲ့တဲ့ soil study ကဒီနေ့မှပဲ အဆုံးသတ်နိုင်တော့တယ်၊ ပထမ တော့ဒီအလုပ်ကို ဒီလောက်ကြာလိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားခဲ့ဘူး။ ပြီးတော့လည်း ဒီလိုလက်ဝင်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ် သိပါ့မလဲ၊ လိုအပ်တဲ့ Organic matter data တွေရရင် ပြီးပြီလို့ ထင်ထားခဲ့တာ...၊ တကယ်တမ်းမှာတော့ အပို တွေအများကြီး ထပ်လုပ်လိုက်ရပါတယ်။
တကယ့်,တကယ်တမ်းပြောရရင် အခုလို soil study ဆိုတဲ့မြေလွှာအကြောင်း လေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်က ကျနော်နဲ့ တိုက်ရိုက်တော့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး၊ ဒီလိုသုတေသနမျိုးက pedology ကလူတွေ လုပ်ရမယ့်ဟာ...။ ဒါပေမယ့် ဒီ soil analysis ကကျနော် စ,ခဲ့တဲ့ အလုပ်ရဲ့ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်နေခဲ့တော့ အဆုံးထိ ဆက်လျှောက်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တော့တာပေါ့။ မနှစ်က ကျနော်တို့ column experiment တစ်ခု စ,ခဲ့ကြတယ်၊ ၆၀ စင်တီမီတာ အမြင့်ရှိတဲ့ စတီးလ် ပိုက်ထဲကို သဲတွေထည့်၊ ဘေးမှာ sample ထုတ်ယူလို့ရအောင် အပေါက် ၄ ခုဖေါက်ထား၊ အဲဒီထဲကိုမှ အနီးမှာရှိတဲ့ ရေကန်ထဲကရေတွေ မပြတ်စီးနေအောင် လုပ်ထားတာပါ၊ ဒီတော့ ရေထဲမှာ သဘာဝအတိုင်း ရှိနေကြတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကသဲတွေ ထဲကို ရောက်လာပြီး နေထိုင်ကြရော...၊ ဒီတော့မှ အဲဒီသဲတွေထဲကို pharmaceutical compounds တွေပါတဲ့ ရေကို ဖြတ်သန်း စီးဆင်းခိုင်းတယ်၊ အဲဒီရေက ပေါင်းခံရေပါ၊ အဲဒီပေါင်းခံရေထဲကိုမှ Diclofenac, naproxen, ketoprofen, ibuprofen အစရှိတဲ့ ဆေးတွေကို ထည့်တယ်။ သူတို့ရဲ့ concentration ကိုသေသေချာချာ တိုင်း ယူထားရပါတယ်၊ ဒီ molecules တွေက သာမန် အိမ်သုံးဆေး၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး အစ,ရှိတဲ့ ဆေးတိုင်း လိုလိုမှာ ပါလေ့ရှိတယ်၊ လူတွေစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ အညစ်အကြေးတွေက တဆင့် ဒီဆေးတွေက သဘာဝမြစ်၊ ချောင်းတွေထဲမှာ တနေ့တခြား များများလာတဲ့ အတွက်သူတို့ကို ဖယ်ရှားဖို့ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်တဲ့သုတေသန ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ၆ လကြာတဲ့ ဒီ experiment အပြီးမှာ data တွေအများကြီး ရလိုက်တယ်၊ ကျနော်တို့ ထည့်လိုက်တဲ့ ဆေးတချို့က အဝင်နဲ့အထွက် concentration မတူကြဘူး။ အဓိပ္ပါယ်က ဒီပိုက်ထဲကို ဖြတ်စီးနေတုန်းမှာ သဲထဲ မှာ removal ဖြစ်တယ်ပေါ့၊ ဒါပေမယ့် တချို့ molecules တွေကျတော့ ဒီအတိုင်း ပြန်ထွက်လာတယ်၊ သဲထဲမှာ ဘယ်လို ပြောင်းလဲမှုမှ မဖြစ်ဘူး၊ ဘာ့ကြောင့်ဒီလို မတူညီတဲ့ adsorption တွေဖြစ်ရတာလဲ? ဒါနဲ့ သဲထဲမှာ ရှိတဲ့ organic matter အရေအတွက်၊ သဲပွင့်တွေရဲ့ size နဲ့ surface area ကိုတဖန် လေ့လာဖို့ ဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။
Organic matter ကိုသိအောင် လုပ်ရတာက သိပ်မခက်ပါဘူး၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် method က Loss on Ignition method ဖြစ်ပါတယ်၊ ပထမ သဲပွင့်တွေကို ၁၀၅ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်မှာ အခြောက်ခံ၊ mass ကိုချိန်တွယ်ထား၊ ပြီး တော့ ၅၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ ၁၆ နာရီကြာ အပူပေးပြီး mass ကို တခါပြန်ချိန်၊ ပြီးတော့မှ သူတို့ရဲ့ mass difference ကိုတွက်ယူတဲ့ နည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ အဖြေထွက်လာတော့ organic matter သိပ်နည်းနေတာကို တွေ့ရတယ်၊ ၁% တောင်မရှိဘူး၊ ထင်ထား တဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ ဒါနဲ့ တခါဆက်ပြီး သဲပွင့်တွေရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ သူတို့ရဲ့ မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို analyze လုပ်ရ ပြန်ပါတယ်။ ဒီလို analysis တွေက ကျနော်ပြောခဲ့သလို pedologist တွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့ သုတေသနပါ၊ ဒါပေ မယ့် ရလာမယ့်အဖြေက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေတာကတကြောင်း၊ တခါမှ မလုပ်ဖူးတဲ့ analysis ဖြစ်နေတာမို့ လုပ်ကြည့်ချင်တာက တကြောင်းကြောင့် ကျနော်လုပ်ဖြစ်သွားပါတယ်၊ (အမှန်တော့ စိတ်မဝင်စားလည်း လုပ်ရ မှာပါပဲ၊ ကျနော့်ကို တာဝန်ပေးထားတာကိုး)။
သဲပွင့်တွေရဲ့ size ကိုတော့ particle size analyzer ဆိုတဲ့ စက်နဲ့တိုင်းတာပါတယ်၊ ဒီစက်က သဲပွင့် အရွယ် အစား ၄၀ နာနိုမီတာကနေ ၂ မီလီမီတာအထိ တိုင်းတာနိုင်တယ်၊ (1 m = 1 000 mm = 1 000 000 um = 1 000 000 000 nm)၊ ဒီ စက်ရဲ့ တိုင်းတာပုံက sample သဲပွင့်တွေပေါ်ကို polarized light beam၊ ဒါမှမဟုတ် laser light beam ထိုးပြီး ဖြာထွက်လာတဲ့ ပြန်လင်းတန်းတွေကို စုစည်းတွက်ယူတဲ့ နည်းဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီလိုနည်း နဲ့ သူဟာ sample တစ်ခုထဲမှာပါတဲ့ ကွဲပြားတဲ့ အရွယ်အစားအားလုံးကို ပြောနိုင်တယ်။ analytical time က လည်း အတော် မြန်ပါတယ်။
မျက်နှာပြင်ဧရိယာကိုတော့ surface area analyzer ဆိုတဲ့ စက်နဲ့တိုင်းတာပါတယ်၊ အဲဒီစက်ပေါ့ ကျနော့်ရဲ့အ ချိန်တွေကို အများကြီးဖဲ့ယူသွားခဲ့တာ၊ ဒီစက်က တိုင်းတာရာမှာ တိကျပေမယ့် အင်မတန်ကြာတယ်၊ sample တွေထဲမှာ ခိုအောင်းနေနိုင်တဲ့ ရေ molecule တွေကို အခြောက်ခံဖို့အတွက် ၂ နာရီကြာ အပူပေးရတယ်၊ ပြီး တော့တခါ တိုင်းတာချိန်ကလည်း အနည်းဆုံး ၁ နာရီကြာတယ်၊ အဆိုးဆုံးကတော့ သူကတကြိမ်ကို sample ၄ ခုထက်ပိုပြီး မလုပ်နိုင်တာပါပဲ၊ ကျနော့်မှာက sample အခု ၃၀ တောင်ရှိတော့ ကြာပြီပေါ့ဗျာ။ ဒီစက်ရဲ့ concept ကတော့ နိုက်ထရိုဂျင် (nitrogen)ပါပဲ၊ သဲပွင့်တွေကို ဖန်ပြွန်ရှည်ထဲကိုထည့်၊ အဲဒီပြွန်ထဲကို နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ် ငွေ့လွှတ်ပြီး တိုင်းတာ,တာပါ၊ sample မပါတဲ့ဖန်ပြွန်ထဲကို နိုက်ထရိုဂျင် ဘယ်လောက် ထည့် လို့ရတယ် ဆိုတာ စက်ကသိပါတယ်၊ ဒီတော့ sample ထည့်ထားလို့ လျော့သွားတဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်ပမာဏဟာ sample ရဲ့ပမာဏပါပဲ၊ ပြီးတော့ နိုက်ထရိုဂျင် molecule တစ်ခုဟာ 1.62 nm2 ရှိတဲ့ ဧရိယာကို ဖုံးအုပ်နိုင် တယ်၊ ဒီတော့ ပြွန်ထဲမှာ ရှိ တဲ့ molecule အရေအတွက်ကိုသိရင် သူ့ရဲ့ မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို သိမယ်၊ အဲဒါ ဟာ sample ရဲ့ မျက်နှာပြင်ဧရိယာပါပဲ။
အခုတော့ လုပ်ရမယ့် measurement တွေအားလုံးလည်း ပြီးပြီ၊ အဖြေတွေကို စစ်ပြီးရင် graph တွေဆွဲရမယ်၊ ပြီးရင်တော့ ကျနော့်ရဲ့ အရာရှိနဲ့ ဆွေးနွေးရမှာပေါ့၊ ဒီကမှတဆင့် နောက်ထပ်လုပ်ရမယ့် experiment အသစ် တခုကို ဆက်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ လောလောဆယ်တော့ လူကနဲနဲ ပင်ပန်းသွားလို့ ရှေ့တပတ်မှာ ခွင့်ယူ ထားလိုက်တယ်...အဟဲ၊ အဲဒီခွင့်ကလည်း ၂၀၀၇ ကကျန်တဲ့ နောက်ဆုံးလက်ကျန် ခွင့်တစ်ပတ်ပါပဲ၊ ဧပြီလ ကုန်အထိမှ မယူရင် အဲဒီခွင့်ဆုံးမှာမို့ ကိုယ့်ခွဲတမ်းတော့ အထိအခိုက်မခံဘဲ ယူလိုက်ရတယ်ပေါ့လေ၊ ဒီတစ်ပတ် မှာတော့ အထိုက်အလျောက် နားခွင့်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်တာပါပဲ...။ ။
၂၈ မတ်၊ ၂၀၀၈
Posted by ညီလင်းသစ် au 28.3.08
ကျွန်တော့် ကို လိုက်ပို့ ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း Damian လဲ ... Soil Test လုပ်တာဗျ :D
March 30, 2008 at 3:09 AM